China Composite FRP Protruded Fiberglass I-Beam Profile ifektri abakhiqizi | Bonai
1. Ikhwalithi ephezulu
Siqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ingaphansi kokuhlolwa okuningi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngaphambi kokuthi zilethwe.
2. Intengo Yokuncintisana
Intengo iyahluka ngokuya ngezidingo zomkhiqizo nobungako bomkhiqizo.
Isici esivelele kunkampani yethu yithimba lethu lesayensi nobuchwepheshe.
4. Insiza Engcono Kakhulu
Kuyo yonke imibuzo yakho ngathi noma ngemikhiqizo yethu, sizokuphendula ngokuningiliziwe kungakapheli amahora angu-12.
5. Ukupakisha nokulethwa
Imikhiqizo ingapakishwa futhi ithunyelwe ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Imibuzo evame ukubuzwa nge-FRP
Q: Ingabe amaphaneli weFiber Reinforced angafakwa ngaphezu kwama-substrates amaningi?
A: Amapaneli we-fiber aqinisiwe angafakwa cishe kuwo wonke ama-substrates. Noma kunjalo, indlela yokufaka esetshenzisiwe izohluka kusuka kwesinye isisekelo esingaphansi kwesinye.
Q: Ungawafaka kanjani ama-fiberglass aqiniswe ngaphezulu kwe-Drywall?
A: Yebo, i-FRP ingafakwa cishe kuwo wonke ama-substrates ngendlela yokufaka yemishini. Kodwa-ke uma usonkontileka efuna ukufaka amapaneli aqinisiwe e-Fiberglass esebenzisa izinto zokunamathisela, kungenziwa, kudingeka nje usebenzise isinamathelisi samahhala kuphela phezu kwezindawo ezinamapulanka ezifana nekhonkrithi block, i-drywall, i-plywood noma udonga lwe-plaster. Lapho ufaka i-FRP ngaphezulu kwezindawo ezingenayo impophoma, njengamathayili odonga, kunconywa ukusebenzisa i-solvent base adhesive nama rivets, Ukuze uqedele ukufakwa okungcono, khumbula ukufaka isihlabathi kumathayili ukuze i-FRP ikwazi ukunamathela kangcono.
Q: Ingabe i-fiberglass eqinisiwe yamapaneli ingafakwa isicaba odongeni?
IMP: Amapaneli e-FRP avumelana nezimo ngakho-ke ingafakwa icwebe odongeni. Kepha khumbula njenganoma iyiphi impahla yokwakha, izokwanda futhi ingene ngokuvumelana nezimo zemvelo lapho yafakwa khona.
Q: Yimaphi amathuluzi adingekayo ukufaka i-FRP?
A: Ukufakwa kwe-FRP kungenziwa ngokusebenzisa: i-fine blade saw blade, i-carbide drill bit, i-trowel enconyiwe yomkhiqizi, kanye ne-laminate roller ezosetshenziselwa ukuqinisekisa ukunamathela okuphezulu phakathi kwe-FRP kanye nendawo lapho ifakwa khona.
Q: I-FRP yenziwa ngosayizi onjani?
A: Amapaneli aqiniswe i-fiberglass imvamisa akhiqizwa ngezinyawo ezine ngezingxenye ezinyaweni eziyisishiyagalombili futhi anezici ezithile zokwakha kanye / noma ukubumba. Ngokusebenzisa okuncane kanye naphezulu, i-FRP inganqunywa ibeke ubukhulu bayo ngokusebenzisa isaha lamandla elinezinyo elicolekileyo, izindwani zethiphu le-carbide noma izindwani zamatshe. Amaphaneli e-FRP ku-1mm ubukhulu anesisindo esingaba ngu-1.5kg ngemitha eyisikwele.
Q: Yini engaba yisisombululo nenqubo yokufaka esheshayo?
A: Amaphaneli aqinisiwe we-fiberglass angahlinzekwa ngamashidi wangaphambi kokunamathisela weplywood, i-EPS insulation noma i-drywall. Ngokusebenzisa lolu hlobo lwe-FRP, kuzovumela ukufakwa okusheshayo futhi kuzokhiqiza indawo ebushelelezi, ngoba iqeda isidingo sama-rivets. Kuyanconywa futhi ngaphambi kokufaka i-FRP ukususa ukupakisha kwamapaneli, endaweni lapho izofakwa khona. I-FRP ngokufanele izomunca izimo ezifanayo zemvelo zendawo lapho amapaneli azofakwa khona.
Langaphambilini I-China Factory eyenziwe ngokwezifiso ye-FRP fiberglass Grating Yokwakha
Olandelayo: I-FRP Purlin Construction Purpose Purlin Intengo
GRP Pultruded fiberglass Amafomu fiberglass Tube ...
China Factory ngokwezifiso zu fiberglass nehele ...